Tafaariiq iyo Iib |
Isku xirka mashiinnada lagu iibiyo casiirka liinta
4G shuruudaha xalka router Mar markaan harraadsado, waxaan aadi jiray dukaan shaaha laga cabo iyo maqaaxi laga cabo si aan usoo iibsado cabitaanno diyaarsan. Haddii aan wax badan cabbo, waxaan dareemayaa caafimaad darro. Haddii aan cabbo casiir liin dhanaan ah marmar, waxaan dareemayaa caafimaad. Ku habboonaanta iyo daahfurnaanta ayaa noqotay ...
Xalka nidaamka wasakhda qaybinta cunnada caqliga badan
1, Ujeedada Naqshadeynta Maalmahan, oo caan ku ah ganacsiga elektaroonigga ah, router-ka warshadaha ee cusub e-commerce wuxuu noqday warshad cusub. Laakiin caqabad weyn ayaa ku jirta warshadaha. Falanqaynta ugu dambeysa, waa in la hubiyo waqtiga, cusub iyo tayada wax soo saarka. Si loo soo koobo dhibaatada rafcaanka iyo de ...
Xalka golaha wasiirada ee Smart express
Horumarinta ganacsiga elektaroonigga ah, warshadaha xawaaladaha ayaa sidoo kale soo galay xilli gumeysi. Codsiga internetka ee waxyaabaha teknolojiyadda ee warshadaha casriga ah ee saadka, golaha caqliga muujiya, sida xalka ugu wax ku oolka badan meylkii ugu dambeeyay ee e-commerce terminal ...
ChiLink IOT 4G router-ka warshadaha ayaa si guul leh loogu dabaqay isku xirka wireless-ka ee is-adeegsiga mashiinka baaritaanka.
ChiLink IOT 4G router-ka warshadaha waxaa si guul leh loogu adeegsadaa isku xirka bilaa-waayirka ee is-gaarsiinta adeegga iskiis u shaqeynaya ee mashiinka wax-soo-saarka Iyadoo horumarka degdegga ah ee sayniska iyo tikniyoolajiyadda, nolosha dadweynaha waxaa la keenay da'da macluumaadka casriga ah, codsiga mashiinka weydiinta waa ...
Xalalka tababarka fog
Qeexitaanka Mashruuca: Tababbarka fog, sidoo kale loo yaqaan dayax gacmeedka tababarka tooska ah, shirarka fog, iwm., Kuma xirna xayiraad juqraafiyeed. 4G router wuxuu xaqiijin karaa qeexitaan sare, waqtiga dhabta ah ee nidaamka tababarka isdhexgalka ee u dhexeeya labada dhibcood iyo dhibco badan iyada oo loo marayo dayax gacmeedka. Wax ...
Mashiinka xayeysiinta ee is-adeegga is-adeegga
3G router ayaa si guul leh loogu adeegsaday mashiinka xayeysiiska isgaarsiinta ee adeegga isgaarsiinta Iyadoo horumarka iyo horumarka xilliyada, baahida gudaha ee mashiinka xayeysiinta multimedia ayaa si tartiib tartiib ah u kordheysa. PLC albaabka kontoroolka fog ee kor u qaadista tikniyoolajiyada macluumaadka, digitization, n ...